OnePlus dia manomana zavatra mahafinaritra | Androidsis
OnePlus dia orinasa manaitra antsika isan'andro na amin'ny alàlan'ny terminal vaovao na amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa navoakany tao anatin'ny taona vitsy niainany. Orinasa tanora izy ity ary noho izany dia manana lesoka isan-karazany izy ireo ka mahatonga ny orinasa tsy hanaraka ny napetraka.
Na dia marina aza fa, vao tsy ela akory izay, ny orinasa dia nifona noho ny asa ratsy nataony tamin'ny famoahana ny fitaovana faharoa sy ny olan'ny fanasana, noho izany dia nilaza ilay orinasa fa amin'ny ho avy dia tsy hanao fampanantenana izy ireo alohan'ny fandefasana azy, ialao ny fanehoan-kevitra ratsy momba izany.
Avelao ireo olan'ny fitantanana orinasa ireo, hitantsika ny fomba namoahan'ny orinasa sary amin'ny tambajotra sosialy miaraka amin'ny hafatra mazava. Eo ambanin'ny teny filamatra » Fanomezana kely firariana »Mety hafenina ny fitaovana vaovao avy amin'ny mpamokatra sinoa. Betsaka aminareo no hieritreritra fa mety ho kinova fihenam-bidy kokoa amin'ny finday avo lenta sinoa ity, saingy tsy azo inoana fa hitranga izany satria tsy naheno na inona na inona momba ny terminal vaovao avy amin'ny One Plus ianao.
Ity vokatra misy haitraitra kely ity dia mety ho fitaovana ho an'ny OnePlus 2. Ity fitaovana ity dia mety ho tranga iray ho an'ny taranaka faharoa amin'ny fitaovana, izay mety hanana fitaovana lafo vidy ary raha tsaraina amin'ny sary navoakan'ny mpanamboatra, dia azo atao ity tranga ity ny hoditra na hoditra. Zavatra efa hitantsika tamin'ny fitaovana avo lenta hafa toa ilay LG G4. Na inona izany na inona, OnePlus dia eo amin'ny sain'ny gazety indray. Hihaino tsara izay hitranga isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus dia manomana zavatra milay